Amụma: "Dị ka ntuli aka Israel, ma ọ dịghị ọchịchị a kpụrụ nso ọbịbịa Mesaya" | Apg29
Amụma: "Dị ka ntuli aka Israel, ma ọ dịghị ọchịchị a kpụrụ nso ọbịbịa Mesaya"
Olee otú ọnọdụ ahụ ugbu a na Israel.
Newspaper Clippings nke Yitzhak Kaduri.
Ọ bụ oge mbụ na Israel akụkọ ihe mere eme na ọ dịla enweghị ike na-etolite a ọchịchị. Ke adianade do, image na Israel nwere nhọrọ abụọ nke afọ a, ma na ọ mere ka a ọchịchị.
40 afọ amụma
E nwere a 40-afọ amụma na ike ugbu a ike jikọrọ ugbu a ọnọdụ na Israel.
The amụma na-abịa site Rabbi Yitzhak Kaduri bụ a dị ịrịba ama nwoke hụrụ foto n'elu. Ọ bụghị nanị na n'ihi na ọ bụ 108 afọ mgbe ọ nwụrụ na 2006.
Ọ bụ a kpọrọ ihe nke ukwuu, mụtara na hụrụ n'anya onye nkụzi maka ọtụtụ ndị Juu. Nke ahụ bụ ikpe, ọ na-enye ọtụtụ n'ime ndị sooro ya ozu sochiri banyere 300,000 na Jerusalem e kpuchie site akwụkwọ ịma ọkwa na kwusara uju mbubreyo Rabbi Yitzhak Kaduri.
Ndụ ya dị nnọọ mfe. Ọ dịrị ndụ a ndụ nke ịda ogbenye, o rie obere, na-ekwu na adịkarịghị ekwu. N'agbanyeghị nke a, o meriri ọtụtụ ndị ntị, mgbe ọ rụrụ ihe.
O kwuru adịkarịghị, ma mgbe o mere ede ihe o kwuru. Afọ 40 gara aga, ha jụrụ ya otú Messiah na-hụrụ na ndị bara uru na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Israel, ma ọ bụ hụrụ ya n'ebe ahụ? Azịza ya bụ obere:
"Dị ka ntuli aka Israel, ma ọ dịghị ọchịchị a kpụrụ nso ọbịbịa Mesaya."
Olee otú ọnọdụ ahụ ugbu a na Israel. Ọ bụ oge mbụ na Israel akụkọ ihe mere eme na ọ dịla enweghị ike na-etolite a ọchịchị. Ke adianade do, image na Israel nwere nhọrọ abụọ nke afọ a, ma na ọ mere ka a ọchịchị.
N'ezie, amụma niile e buru na-enyocha ma ha agaghị ga-eleda anya, ọ na-ekwu nke a obere amaokwu:
"Ọ bụghị anagh'akpa amụma." 1 Nke. 5:20.
Ọ bụ n'ezie oge na-aghọta na Jizọs nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla! Anyị nwere ike-abụ nkịtị na nke a dị ịrịba ama amụma. Ugbu a ọ bụ kama ibu ọrụ nke onye na-agụ ozi nke ga-eme eme.
Ọtụtụ mmadụ ga-ajụ a na chebe onwe ha megide ya. All ụdị arụmụka megide a ga-abịa.
Ọ bụ na ebe a na Swedish Christianity a oké enweghị nghọta nke amụma n'ezie ihe omume, gịnị na-adịghị ekwu okwu banyere Jizọs laghachi.
Ihe ọjọọ orù
Jesus buru amụma na ọtụtụ kama nwere a àgwà ọjọọ kwupụta ozi nke Jizọs laghachiri na-ekwere na nke a nwere ike eme eme ugbu a. Nke a bụ oké njọ maka Jesus oku dị otú ahụ a orù ọjọ!
"Ma ọ bụrụ na na na ohu ajọ omume na-ekwu ka ya onwe ya, nna m ukwu na-egbu oge". Matt. 24:48.
Ebe i nwere ike na-agbalị onwe gị na mmekọrita okwu ndị a Jizọs ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe Jizọs na-ekwu, ihe ọjọ orù.
Ọ bụghị ikpe
Ọ bụghị na anyị na-ekwu na-enweghị Jesus. Nke a na-adịghị dere ikpe orù Jehova enweghị otu ugboro ọzọ ịhụnanya na-agbalị ime ka ibu ọrụ na ihe mgbochi.
Ị na-azoputaghi ma ọ bụ na-ebi ndụ a ụgha ndụ, na-eche free iji nweta na-eleta anyị otú anyị na-akparịta ụka na. Ọ bụ ugbu a abụghị inupụ on ka i mee nzọụkwụ, ọ nwere ike na-enwe mgbe nile mbubreyo!